यी राशी भएका पुरुषहरु, आफ्नो श्रीमती वा प्रेमिकालाई अत्याधिक माया गर्छन ! – Butwal Sandesh
यी राशी भएका पुरुषहरु, आफ्नो श्रीमती वा प्रेमिकालाई अत्याधिक माया गर्छन !
कसको चाहाना हुँदैन श्रीमान् श्रीमती सधै हांसी खुशी बाँचौ । तर कसैको त्यो चाहनामा कहिलेकाँही ठे’स लाग्छ, कसैको भने पुरा हुन्छ । कोहि पुरुष आफ्नो श्रीमतीको इच्छा चाहनाको ख्यालै नगर्ने स्वार्थी हुन्छन् भने कोहि पुरुष आफ्नो श्रीमतीलाई सुखी र खुशी राख्न कुनै कसुर बाँकी राख्दैनन् । ज्योतिष शास्त्रकाअनुसार कसैले सुखी र खुशी खोजेर मात्रै पाउने होइन त्यो त आफ्नो ग्रह द’शा र राशिअनुसार जुर्नु पर्छ । यहाँ हामी त्यस्ता राशि भएका पुरुषहरुको बारेमा कुरा गर्न गैरहेका छौं जसले श्रीमतीलाई हर समय हर सम्भब खुशी राख्न चाहन्छ ।
यसो भन्छ ज्योतिष शास्त्र
मेष राशी : यो राशी हुने व्यक्तिहरुको पति पत्नी बिचको स’म्बन्ध राम्रो हुनाले एकअर्काको प्रेममा पा*गल हुने गर्छन् । एकअर्काको समस्या बुझ्ने र एक अर्काको स|मस्या पुरा गर्न सक्ने भएको हुनाले उनीहरुको व्यवहार पनि अत्याधिक राम्रो हुने गर्छ । यो राशी भएका पुरुषहरु बफादार हुने भएकाले पत्नीसँगको स’म्बन्ध पनि राम्रो हुने गर्छ ।